ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: how to repeat Youtube Music
how to repeat Youtube Music
ကျွန်တော်တို့ Youtube က သီချင်းတွေမှ မိမိကြိုက်တဲ့သီချင်းကို Player တွေလို Repeat ပေးလို့ရတဲ့နည်းလေးကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းဆို မိမိဖွင့်ထားတဲ့ သီချင်းပြီတာနဲ့ ရပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေးမဲ့ အဲဒီလို မရပ်ရအောင် Loop=1&autoplay=1 code နဲ့ link ကိုပြင်လိုက်တာနဲ့ မိမိဖွင့်ထားတဲ့သီချင်းကို မပိတ်မချင် Repeat လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်. စိတ်ဝင်စားရင် စမ်းကြည့်လိုက်ပါ. ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ Link ကိုလဲ Repeat ဖြစ်မဖြစ်စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
1.www.Youtube.com မှ မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သီချင်းကို ရှာလိုက်ပါ.. ပြီရင် URL အကွက်မှ Link ကို copy ကူးလိုက်ပါ။ကောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ။
2. Copy ကူလာတဲ့ Link ကိုအောက်ပါအတိုင်းပြောင်းလိုက်ပါ။ပြောင်းရမည့်နေရာတွေကို အနီရောင်နဲ့ပြသထားပါတယ်။/watch?v= ကို /v/လို့ပြောင်းလိုက်ပါ။ ပြီရင်နောက်ဆုံးမှာ &loop=1&autoplay=1 လို့ထည့်လိုက်ပါ။အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါ။
ဒီနည်းကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ www.youtube နောက်မှာ repeat လို့ရိုက်လိုက်ရုံပါဘဲ။
မှက်ချက်။ ။ မြန်မာပြည်နှင့် တရုက်နိုင်ငံတိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ မရပါ။ ကျော်ခွကြည့်မှ အဆင်ပြေပါမည်။